၂၀၁၉ မှာ ကံကောင်းမယ့် စနေသားသမီးများ...! - Thadin
Homeဗေဒင်ယတြာ၂၀၁၉ မှာ ကံကောင်းမယ့် စနေသားသမီးများ…!
၂၀၁၉ မှာ ကံကောင်းမယ့် စနေသားသမီးများ…!
March 15, 2019 Kay Kay ဗေဒင်ယတြာ Comments Off on ၂၀၁၉ မှာ ကံကောင်းမယ့် စနေသားသမီးများ…!
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ကံကောင်းစေသောနေ့သားများတွင် စနေသားသမီးများလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် စနေသားသမီးများသည် စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအောင်မြင်နိုင်သောအချိန်အခါ ဖြစ်သည်။မိမိအလုပ်အကိုင်မှ အကျိုးအမြတ်များထူခြားစွာရနိုင်သော နှစ်လဲဖြစ်သည်။ ဤနှစ်သည် စနေသားသမီးများအတွက် နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခြင်းများ ၊ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအောင်မြင်ကျော်ဇောသောဂုဏ်သတင်းများဟိုးဟိုးကျော်နေတတ်သောအချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ လုပ်ကိုင်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ပါ။ ဘာသာရေးလိုက်စားပါ။သီလသမာဓိတည်မြဲရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို ဖြတ်လမ်းနည်း ၊ မသမာနည်းလမ်းများဖြင့် မကောင်သောလုပ်ရပ်များကိုတော့ လုပ်ကိုင်၍ မရပါ။ လုပ်ကိုင်မိပါက နှစ်ရှည် ဒုက္ခရောက်တတ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာချိုးဖောက်ခြင်းမျိုးကိုတော့ ရှောင်ကျဉ်ပါ။
လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့မည့်သူများ၊ နေရာထိုင်ခင်းပြောင်းရွှေ့မှု ပြုလုပ်မည့် သူများအဖို့ အလွန်ကောင်းမွန်သော နှစ်တနှစ် ဟုဆိုရပါမည်။ ဓာတ်ဆီ ၊ဒီဇယ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ ၊ အထည်အလိပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ ၊ ထီး ၊ဖိနပ် နာရီဆိုင် ၊ ထမင်းဆိုင်၊ အုတ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင် ဖွင့်ထားသူများအရောင်းအဝယ်ကောင်းမွန်သော နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်မည့် သူများအတွက် တော့ မြောက်အရပ်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးမဖွင့်ရန် အထူးသတိပြုပါ။မိမိ၏ လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးအကူအညီရတတ်သလိုအမျိုးသမီးကြောင့်လဲမိမိ၏လုပ်ငန်းများမိမိ၏နာမည်ဂုဏ်သတင်းများပျက်စီးတတ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအဓိကနှင့် သာမညခွဲခြားတတ်ပါစေ။ မိမိအနေနှင့်လူမျိုးခြားဘာသာခြားအကျိုးပေးသောကာလဖြစ်သည်။
အောက်လက်ငယ်သားအကျိုးပေးသောကာလဖြစ်ပါသည်။မိသားစုကိစ္စလေးတော့ စိတ်ညစ်စရာပေါ်သည်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ နှင့်ပတ်သတ်ပြီးစကားပြောဆိုစရာလေးတွေ ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်စရာကိစ္စတွေကြုံသလိုငွေကြေးအကုန်ကြလေးတွေလဲများနေတတ်ပါသည်။ငွေကြေးချေးငှားခြင်းမျိုးတော့ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အကြီးအကဲနှင့်ပတ်သတ်ပြီးငွေကြေးကိစ္စများအကုန်အကြများတတ်သည်။
မိခင် ၊ အစ်ကို ၊အစ်မတို့နှင့် ပတ်သတ်ပြီးစိတ်ညစ်လေးတော့ရှိနေတတ်သည်။ မိသားစုချင်းအချင်းချင်းစကားပြောစရာလေးတွေကြုံရတတ်သည်။ ပတ်ဝန်ကျင်နှင့်စကားနိုင်လုရတတ်သည်။ ရွှေဝင်ကိန်းရှိခဲ့သည်။ အပျိုလူပျိုများအချစ်ရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဆန်းပွင့် နေရတတ်ပါသည်။ မိမိအချစ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နေရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ပြုမည်ဟုရည်ရွယ်ထားသူများလဲအိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
အိမ်ထောင်ရှိသူများအနေနှင့် မိမိအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စလေးတွေမှာတော့ လင်နဲ့မယားရှာနဲ့သွားဆိုသလိုအိမ်တွင်းပြဿနာလေးတွေရှိတတ်ပါသည်။ တယောက်ကိုတယောက် နားလည်မှုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငွေကြေးကိစ္စလေးတော့ အနည်းငယ်စိတ်ညစ်စရာ ကြုံနေရပါလိမ့်မည်။ဤနှစ်သည် လူမှုရေးအတိုက်အခံများသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့အနေနှင့် စကားပြောဆင်ခြင်ပေးရမည်။
ကျန်းမာရေးကိစ္စလေးတွေမှာတော့ ခြေထောက် ထိခိုက်နာကျင်ခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပတ်သတ်သောကျန်းမာရေးများဂရုစိုက်ပေးပါ။ ဆေးခန်းပြရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါသည်။ လူပြုစားခြင်းခံရတတ်တဲ့အတွက် မိမိအနေနှင့် ပတ်ဝန်ကျင်ကကျွေးသောအစားအသောက်များသတိထားပြီးရှောင်သင့်ပါသည်။
ယတြာ။ ။အုန်း(၁)ညွှန့် ၊ ပျဉ်းမ(၅)ညွှန့် ဘုရားလှူ လိုရာဆုတောင်းပါ။
အကျိုးပေးသောအရောင် ။ ။အနီရောင်၊ အဝါရောင်
၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ ကံကောငျးစသေောနသေ့ားမြားတှငျ စနသေားသမီးမြားလညျးအပါအဝငျဖွဈသညျ။
ယခုနှဈတှငျ စနသေားသမီးမြားသညျ စီးပှားရေးနှငျ့ပတျသတျပွီးအောငျမွငျနိုငျသောအခြိနျအခါ ဖွဈသညျ။မိမိအလုပျအကိုငျမှ အကြိုးအမွတျမြားထူခွားစှာရနိုငျသော နှဈလဲဖွဈသညျ။ ဤနှဈသညျ စနသေားသမီးမြားအတှကျ နာမညျဂုဏျသတငျးကြျောစောခွငျးမြား ၊ လုပျငနျးနှငျ့ပတျသတျပွီးအောငျမွငျကြျောဇောသောဂုဏျသတငျးမြားဟိုးဟိုးကြျောနတေတျသောအခြိနျကာလဖွဈပါသညျ။
ငှကွေေးရငျးနှီးမွှပျနှံမှုတှေ လုပျကိုငျပါ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတှေ တိုးခြဲ့ပါ။ ဘာသာရေးလိုကျစားပါ။သီလသမာဓိတညျမွဲရနျ အထူးလိုအပျပါသညျ။ မညျသညျ့လုပျငနျးကိုမဆို ဖွတျလမျးနညျး ၊ မသမာနညျးလမျးမြားဖွငျ့ မကောငျသောလုပျရပျမြားကိုတော့ လုပျကိုငျ၍ မရပါ။ လုပျကိုငျမိပါက နှဈရှညျ ဒုက်ခရောကျတတျသညျ။ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာခြိုးဖောကျခွငျးမြိုးကိုတော့ ရှောငျကဉျြပါ။
လုပျငနျးပွောငျးရှမေ့ညျ့သူမြား၊ နရောထိုငျခငျးပွောငျးရှမှေု့ ပွုလုပျမညျ့ သူမြားအဖို့ အလှနျကောငျးမှနျသော နှဈတနှဈ ဟုဆိုရပါမညျ။ ဓာတျဆီ ၊ဒီဇယျ လုပျငနျးလုပျကိုငျနသေူမြား ၊ အထညျအလိပျလုပျကိုငျနသေူမြား ၊ ထီး ၊ဖိနပျ နာရီဆိုငျ ၊ ထမငျးဆိုငျ၊ အုတျလုပျငနျး၊ အိမျဆောကျပစ်စညျးဆိုငျ ဖှငျ့ထားသူမြားအရောငျးအဝယျကောငျးမှနျသော နှဈဖွဈပါသညျ။
ဆိုငျခနျးဖှငျ့လှဈမညျ့ သူမြားအတှကျ တော့ မွောကျအရပျကိုမကျြနှာလှညျ့ပွီးမဖှငျ့ရနျ အထူးသတိပွုပါ။မိမိ၏ လုပျငနျးပိုငျးတှငျ အမြိုးသမီးအကူအညီရတတျသလိုအမြိုးသမီးကွောငျ့လဲမိမိ၏လုပျငနျးမြားမိမိ၏နာမညျဂုဏျသတငျးမြားပကျြစီးတတျပါသညျ။ အမြိုးသမီးနှငျ့ပတျသတျပွီးအဓိကနှငျ့ သာမညခှဲခွားတတျပါစေ။ မိမိအနနှေငျ့လူမြိုးခွားဘာသာခွားအကြိုးပေးသောကာလဖွဈသညျ။
အောကျလကျငယျသားအကြိုးပေးသောကာလဖွဈပါသညျ။မိသားစုကိစ်စလေးတော့ စိတျညဈစရာပျေါသညျ။ မွကေိစ်စ၊ အမှကေိစ်စ နှငျ့ပတျသတျပွီးစကားပွောဆိုစရာလေးတှေ ကွုံနရေတတျပါတယျ။ ငှဝေငျစရာကိစ်စတှကွေုံသလိုငှကွေေးအကုနျကွလေးတှလေဲမြားနတေတျပါသညျ။ငှကွေေးခြေးငှားခွငျးမြိုးတော့ ရှောငျကဉျြပါ။ အကွီးအကဲနှငျ့ပတျသတျပွီးငှကွေေးကိစ်စမြားအကုနျအကွမြားတတျသညျ။
မိခငျ ၊ အဈကို ၊အဈမတို့နှငျ့ ပတျသတျပွီးစိတျညဈလေးတော့ရှိနတေတျသညျ။ မိသားစုခငျြးအခငျြးခငျြးစကားပွောစရာလေးတှကွေုံရတတျသညျ။ ပတျဝနျကငျြနှငျ့စကားနိုငျလုရတတျသညျ။ ရှဝေငျကိနျးရှိခဲ့သညျ။ အပြိုလူပြိုမြားအခဈြရေးနှငျ့ပတျသတျပွီးဆနျးပှငျ့ နရေတတျပါသညျ။ မိမိအခဈြရေးနှငျ့ ပတျသတျပွီးမိမိစိတျကွိုကျရှေးခယျြနရေတတျသညျ။ အိမျထောငျပွုမညျဟုရညျရှယျထားသူမြားလဲအိမျထောငျပွုဖွဈပါလိမျ့မညျ ။
အိမျထောငျရှိသူမြားအနနှေငျ့ မိမိအိမျထောငျရေးကိစ်စလေးတှမှောတော့ လငျနဲ့မယားရှာနဲ့သှားဆိုသလိုအိမျတှငျးပွဿနာလေးတှရှေိတတျပါသညျ။ တယောကျကိုတယောကျ နားလညျမှုထားရနျ လိုအပျပါသညျ။ ငှကွေေးကိစ်စလေးတော့ အနညျးငယျစိတျညဈစရာ ကွုံနရေပါလိမျ့မညျ။ဤနှဈသညျ လူမှုရေးအတိုကျအခံမြားသောအခြိနျဖွဈသညျ။ ဒါကွောငျ့ မိမိတို့အနနှေငျ့ စကားပွောဆငျခွငျပေးရမညျ။
ကနျြးမာရေးကိစ်စလေးတှမှောတော့ ခွထေောကျ ထိခိုကျနာကငျြခွငျး၊ အဆဈအမွဈကိုကျခဲခွငျး၊ ဝမျးဗိုကျနှငျ့ ပတျသတျသောကနျြးမာရေးမြားဂရုစိုကျပေးပါ။ ဆေးခနျးပွရတာမြိုးကွုံရတတျပါသညျ။ လူပွုစားခွငျးခံရတတျတဲ့အတှကျ မိမိအနနှေငျ့ ပတျဝနျကငျြကကြှေးသောအစားအသောကျမြားသတိထားပွီးရှောငျသငျ့ပါသညျ။
ယတွာ။ ။အုနျး(၁)ညှနျ့ ၊ ပဉျြးမ(၅)ညှနျ့ ဘုရားလှူ လိုရာဆုတောငျးပါ။
အကြိုးပေးသောအရောငျ ။ ။အနီရောငျ၊ အဝါရောငျ
မူဆယ်တွင် ဆိုက်ကယ်ရပ်သည့်နေရာနယ်နိမိတ်ကျော်သည့်ကိစ္စ တရုတ်နယ်ခြားစောင့်ရဲမှ လာရောက်ပြောဆို…!
ဖခင်ဖြစ်သူက အသက်(၉)နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းဖြစ်သူအား သားမယားအဖြစ် အဓမ္မပြု့ကျင့်…!
This Month : 37034
This Year : 232432
Total Users : 591456
Views Today : 7176
Total views : 2713068